Agaasimihii hore ciyaaraha Real Madrid: “Is casilaada Zidane waa qasaarihii ugu weynaa ay kooxda la kulantay” – Gool FM
(Real Madrid) 06 Juunyo 2018. Agaasimihii hore ciyaaraha ahna xidigii hore ee kooxda Real Madrid Predrag Mijatović ayaa wuxuu sheegay inaysan jirin cid gaari karta guulaha uu ka sameeyay Zinedine Zidane kooxda Los Blancos.
Laacibkii hore kooxda Real Madrid Predrag Mijatović ayaa dhinaca kale sheegay in bixitaanka Zinedine Zidane ay tahay qasaarihii ugu weynaa ay la kulantay Los Blancos.
Zinedine Zidane ayaa iska casilay shaqada kooxda Real Madrid kadib markii uu ku hogaaiyay tartankii saddexaad xiriir ah ee Champions League, ahna sidoo kale kii 13-aad ee taariikhda kooxda Los Blancos.
Mijatović ayaa u sheegay wakaalada wararka Spain “Waa guuldaradii ugu weyneed ay Real Madrid la kulanto, sababtoo ah waxay gaartay guulo cajiib ah ay ku adkaan doonto macalin kasta inuu dib u soo celiyo ama xitaa uu ku dhawaado”.
“Ilama ahan wax fudud in la helo Zidane oo kale oo xiriir wanaagsan la lahaa ciyaartoyda, saxaafada, taageerayaasha, qof walba ayaa u xiisi doona”.